Ny sakafo /
Toro-hevitra sy fikafika vitsivitsy
Fomba fanovanovana ny glucide ao amin'ny sakafo.
Ny olona mahay manovaova ny karazan-tsakafo no antsoina hoe mahay mandanjalanja ny sakafo ohaniny. Izany dia mitovy amin'ny hoe mandanjalanja ny karazan-tsakafo arakaraky ny lanjan'ny siramamy (glucose) ao anatin'ny sakafo, amin'ny fatra sy lanja arakaraky ny fotoana ilana azy. Ny siramamy (glucide) dia tsy hoe tsy azon'ny diabetika ohanina fa kosa ny mifanohitra amin'izany aza fa saingy ilana FANDANJALANJANA tokoa.
Hita amin'ny karazan-tsakafo maro ny glucide fa miovaova arakarak'ilay sakafo ny lanja sy ny fatrany : ny mofo sy ny lafarinina, ny vary, ny pâtes, ny legioma, ny voankazo sy ny azo avy aminy rehetra, ny ronono sy ny vokatra azo avy amin'ny ronono, ny zava-mamy rehetra, ny zava-pisotro mamy...
Ahoana ary no fomba andanjalanjana ny siramamy entin'ny sakafo ?
Raha ny tokony ho izy dia mahatratra hatramin'ny 50%n'ny hery entin'ny sakafo no azontsika avy amin'ny glucide isan'andro. Nefa izay dia arakaraky ny fomba fiaina sy ny toe-batana (taona, lahy na vavy, toe-batana...)
Noho izany dia ilaina ny mahafatampatatra ny lanjany glucide misy ao amin'ny sakafo na ny sasantsasany. Afaka manontany ny mpitsabo ianao ny mahakasika izay na koa manantona ny manam-pahaizana manokana momba ny sakafo.
Misy fomba tsotra roa ihany koa ireto afaka hamarana ny fatran'ny sakafo ohanina araky ny fampianaran'ny Fikambanan'ny diabetika any Canada. (http://starsystem-fr.sanofi.ca/pages/nutrition).
Ny fikafika amin'ny alalan'ny lovia.
Ny fikafika amin'ny alalan'ny tanana.
Tokony ho ferana ihany koa ny fisotroana alikaola (toaka).
Amin'ity sehatra iray ity, araky ny voalazan'ireo mana-pahaizana momba ny diabeta na avy any ivelany na eto Madagasikara, dia tokony mahazo alalana avy amin'ny mpitsabo manokana momba ny diabeta ny olona diabetika iray vao afaka misotro zava-pisotro misy alikaola, nefa kosa tokony misy sakafo miaraka amin'ny fisotroana ilay zava-pisotro misy alikaola.